ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - အမေရိကန်တိရစ္ဆာန်ရုံက ကျားမကို ကိုဗစ်- ၁၉ ကူးစက်ခဲ့တာတွေ့ရ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - အမေရိကန်တိရစ္ဆာန်ရုံက ကျားမက...
6 เม.ย. 2563 - 20:55 น.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့က ဘရွန့်ဇ်တိရစ္ဆာန်ရုံက အသက် လေးနှစ်အရွယ် မာလာယုကျားမ တစ်ကောင်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
နာဒီယာလို့ ခေါ်တဲ့ အဲဒီကျားမဟာ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ ကိုဗစ်၁၉ ကူးစက်တာ အမေရိကန်မှာ ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရွန့်ဇ်တိရစ္ဆာန်ရုံကတော့ ကျားမမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးခံနေရတယ်ဆိုတာ အိုင်အိုဝါမြို့က အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဓာတ်ခွဲခန်းက အတည်ပြုချက်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နာဒီယာအပါအဝင် တခြား ကျားနဲ့ ခြင်္သေ့ ခြောက်ကောင်ဟာ ရောဂါလက္ခဏာပြမနေတဲ့ တိရစ္ဆာန်ရုံအစောင့် တစ်ယောက်ဆီက ကူးစက်ခံရတာလို့ ယူဆရပါတယ်။
အဲဒီဝန်ထမ်းနဲ့ အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ကုန်လောက်က စလို့ ကျားတွေ ခြင်္သေ့တွေမှာ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာအပါအဝင် ကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ဆီကနေ တိရစ္ဆာန်ကိုကူးပြီး တိရစ္ဆာန်လည်း ဖျားနာနိုင်တယ်ဆိုတာကို ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ သိခဲ့ရတာပါပဲလို့ တိရိစ္ဆာန်ရုံက ဆရာဝန် ပေါလ်ကယ်လီက ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာ့တခြားဒေသတွေမှာလည်း တိရစ္ဆာန်တွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေ့ခဲ့ရပေမယ့် အဲဒီပိုးကြောင့် နာမကျန်းဖြစ်တာ၊ ပိုးကို ဆက်ဖြန့်နိုင်တာမျိုး အထောက်အထား မတွေ့ရသေးပါဘူးလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
ဘရွန့်ဇ်တိရစ္ဆာန်ရုံက သူတို့တွေ့ရှိချက်တွေကို တခြားတိရစ္ဆာန်ရုံတွေ၊ ကိုဗစ် ၁၉ ပျံ့နှံ့မှုကို လေ့လာသုတေသနပြုနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို မျှဝေပေးသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နာဒီယာနဲ့ သူ့ညီမ အဇူးလ်၊ နောက် ကျားနှစ်ကောင်နဲ့ အာဖရိက ခြင်္သေ့သုံးကောင်တို့မှာ ကိုဗစ်လက္ခဏာတွေ တွေ့ခဲ့ရပေမယ့် အားလုံးပြန် ကျန်းမာလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရကြောင်း တိရစ္ဆာန်ရုံက ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
ဒီ တောကောင်ကြီးတွေမှာ အစာစားချင်စိတ်နည်းနေတာ တွေ့ရပေမယ့် ဆေးကုသစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာ နေထိုင်ကောင်းနေကြပြီး သူတို့ကို ထိန်းသူတွေနဲ့လည်း တုံ့ပြန်ဆက်ဆံမှုတွေ ရှိနေပါတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျားနဲ့ ခြင်္သေ့တွေမှာမှ ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဘယ်လိုကူးစက်ပျံ့နှံ့လည်းဆိုတာ မသိရသေးဘဲ တိရစ္ဆာန်တွေဟာ ရောဂါပိုးအသစ်နဲ့တွေ့ရင် တုံ့ပြန်ပုံကွာခြားတတ်ကြတာကြောင့် တခြားတိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်း အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ တိရစ္ဆာန်ရုံက ပြောပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ ရှိတဲ့ တခြားကျားလေးကောင်၊ နှင်းကျားသစ်၊ ချီးတားကျားသစ်၊ ပျောက်ကြားကျားသစ်၊ ပျူးမားခြင်္သေ့တို့မှာတော့ ရောဂါလက္ခဏာ မပြကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အခုရောဂါပိုးကူးခံခဲ့ရတဲ့ ကျား၊ ခြင်္သေ့တွေဟာ သူတို့ကို ထိန်းနေတဲ့လူဆီက ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီလူမှာ ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ ပိုးရှိနေချိန်မှာ၊ ဒါမှ မဟုတ် ရောဂါလက္ခဏာ မပြသေးချိန်မှာ ကူးစက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ တိရစ္ဆာန်ရုံက ဆိုပါတယ်။ အခု ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့ တောကောင်တွေအားလုံးဟာ ကျားတောင်ကုန်းလှောင်အိမ်နေရာက ဖြစ်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တခြားကျားတွေကိုရော ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်မလုပ်ဆိုတာကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ ဘရွန့်ဇ်တိရစ္ဆာန်ရုံအပါအဝင် တိရစ္ဆာန်ရုံလေးခု စလုံးကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ကတည်းက ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ တိရစ္ဆာန်တွေရော သူတို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူတွေကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွေ လုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ် ဆက်စပ်ပုံ
အခုနောက်ဆုံး ကိုဗစ် ၁၉ လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ စတွေ့ခဲ့တာပါ။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တိရစ္ဆာန်တွေက စတင်ပြန့်ပွားတာလို့ ယူဆရပြီး ဝူဟန်မှာရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်အရှင်တွေ ရောင်းတဲ့ စျေးကနေ လူတွေဆီကို စတင်ကူးစက်တာလို့ ယူဆထားကြပါတယ်။
အခုလို ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါအဆင့်အထိ ဖြစ်လာတာဟာ လူအချင်းချင်း လျင်လျင်မြန်မြန် ကူးစက်တာကနေ ဖြစ်လာတာပါ။ အခုနောက်ဆုံး လူကနေ ကျားကို ကူးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတော့ နောက်ထပ် မေးခွန်းအသစ်တွေ ရှိလာပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစိတ်အသစ်ရဲ့ ကူးစက်ပုံ၊ ပျံ့နှံ့ပုံတွေကို ပညာရှင်တွေ လေ့လာနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေမှာ ကိုဗစ် ကူးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကတော့ အတော်လေး ရှားပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာ ခွေးနှစ်ကောင် ကူးခံရတယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ အိမ်မွေး ခွေးတွေ၊ ကြောင်တွေက ဖြစ်ဖြစ် တိရစ္ဆာန်ကနေ လူကို ကူးစက်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား လုံးဝ မတွေ့ရသေးပါဘူးလို့ ဘရွန့်ဇ်တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့ ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ကလည်း အိမ်မွေးခွေးတွေ ကြောင်တွေက တဆင့်လူကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား မရှိပါဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီက ပညာရှင်တွေကလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားပုံတွေကို ဆက်လေ့လာနေကြပြီး နေမကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ထိတွေ့တာ ရှောင်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - အမေရိကန်တိရစ္ဆာန်ရုံက ကျားမကို ကိုဗစ်- ၁၉ ကူးစက်ခဲ့တာတွေ့ရ